ဒီအဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ hack ခံရခြင်းကိုရှောင်ပါ FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ဒီအဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ hack ခံရခြင်းကိုရှောင်ပါ
ChrisADR | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
အခုထိကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထိမိပြီဟုမထင်ပါ။ လုံခွုံရေးဤအကြောင်းအရာသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်လာပြောမည့်အကြောင်းအရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ article ဤဆောင်းပါးတိုအပြီးတွင်သင်၏အန္တရာယ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့်လူအများအားမည်သို့လျော့နည်းစေနိုင်မည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါဟာမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပါသည်, ဒီနှစ်တစ်နှစ်တည်း၌, ငါတို့ပြီးသားတစ်လမ်းအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တာဝန်ပေးအပ်အားနည်းချက်ပေါင်း 15000 ကျော်ပါပြီ အများပြည်သူ။ ငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာ Gentoo တွင်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်များမှ CVE များကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားနည်းသောဆော့ဝဲလ်များကိုအသုံးပြုသည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဤနည်းဖြင့်၎င်းကိုမွမ်းမံခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူတိုင်းတွင်လုံခြုံသည့်ကိရိယာများရှိကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ဘုံအားနည်းချက်များနှင့်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်အသုံးပြု အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်၎င်း၏အတိုကောက်အတွက်၎င်းတို့သည်ရှိပြီးသားအားနည်းချက်တစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောထူးခြားသောအမှတ်အသားများဖြစ်သည်။ Gentoo Developers တော်တော်များများဟာလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပံ့ပိုးပေးတာ၊ သူတို့တွေ့ရှိတာတွေကိုရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းစတာတွေအတွက်ပြင်ဆင်တာတွေ၊ ပြုပြင်တာတွေလုပ်တာကိုကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ငါစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ပျော်မွေ့ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရွေးချယ်စရာများ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Apache ဆာဗာများကိုထိခိုက်သောအားနည်းချက်တစ်ခု။ ငါဘာကြောင့်ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ငါပြောရတာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ အားနည်းချက်တွေကိုလျှို့ဝှက်ထားတာကအနည်းငယ်သာအကျိုးပြုတယ်၊ ပြီးတော့ဒီအကျိုးဆက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကပ်ဘေးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။
CNAs များသည် CVEs များကိုတောင်းခံခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုတာဝန်ယူရသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာ Microsoft's CNA ရှိတယ်၊ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့၊ ဖြေရှင်း၊ CVE အချိန်ကျော်နောက်ပိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ဘို့။
မည်သည့်စက်ကိရိယာမျှလုံခြုံမှုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ၁၀၀% လုံခြုံမှုရှိမရှိကိုစတင်လေ့လာကြပါစို့။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အန္တရာယ်များသည်အမြဲတမ်းရှိနေမည်၊ လူသိများမည်သို့မဟုတ်မသိသောကြောင့်ဖြစ်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စွန့်စားမှုများရင်ဆိုင်ရသောအခါအောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အန္တရာယ်လျော့ပါးသက်သာစေခြင်းသည်၎င်းကိုလျှော့ချရုံထက်မကပါ။NO ဖျက်ပစ်ပါ။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်တွင်အလွန်အရေးကြီးပြီးအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသည်“ hack” မခံလိုသော်လည်းအမှန်အကန်ပြောရလျှင်ကွင်းဆက်တွင်အနိမ့်ဆုံးအချက်မှာပစ္စည်းကိရိယာမဟုတ်၊ ပရိုဂရမ်လည်းမဟုတ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ လူ့။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတစ်ပါးကိုဖြစ်စေ၊ အရာဖြစ်စေဖြစ်စေအခြားသူများကိုအပြစ်တင်ရန်အလေ့အထရှိကြသည်။ သို့သော်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးတွင်မူတာ ၀ န်သည်အမြဲတမ်းလူသား၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်လမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်းမလိုက်လျှောက်လျှင်သင်ပြpartနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ နောက်မှမင်းကိုနည်းနည်းပိုပြီးလုံခြုံအောင်နေဖို့ငါနည်းနည်းလေးပြောပြမှာပါ။ 😉
၎င်းသည်လူသိများသောနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး အဖြစ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ Banco။ သင်၏ငွေကို (ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆိုလိုခြင်း) ကိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါအလုံခြုံဆုံးအရာမှာသင်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်သည့်သူတစ် ဦး ဦး နှင့်အတူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများကိုဂရုစိုက်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ခန်း (မလွယ်ကူပါက) သင့်အတွက်မလိုအပ်ပါ။ သင့်ထက်သာသောအရာတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းရန်တစ်စုံတစ်ယောက် (သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော) တစ်ယောက်သာရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဒါပေမယ့်ပထမနှင့်ဒုတိယသက်ဆိုင်မှုမရှိလျှင်, တကယ်အရေးကြီးသောမေးခွန်းဖြစ်လာသည်။ ဒီသယံဇာတ၊ အချက်အလက် / စသည်တို့သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသနည်း။ အဖြေကများများစားစားရှိရင်၊ ပထမနှစ်ခုအကြောင်းစဉ်းစားသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဖြေက ဤမျှလောက်မရဒီတစ်ခါလည်းသင်အန္တရာယ်လက်ခံဖို့ရှိသည်။
သင်ရင်ဆိုင်ဖို့လိုသည်၊ အရာရာတိုင်းကိုလျှော့ချရန်မဟုတ်ပါ၊ အချို့သောလျော့ပါးစေမည့်အရာများသည်အရင်းအမြစ်များစွာကိုကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံများစွာကို ပြောင်းလဲ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲတကယ့်ဖြေရှင်းချက်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ သင်ကာကွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းသည်ပထမသို့မဟုတ်ဒုတိယအဆင့်တွင်နေရာကိုရှာမတွေ့ပါက၎င်းကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်တတိယအဆင့်တွင်ယူပါက၎င်းထက် ပို၍ တန်ဖိုးမထားပါနှင့်၊ ထိုအရာနှင့်မရောနှောပါနှင့်။ သူတို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
၎င်းသည်ရာနှင့်ချီသောလူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှလွတ်မြောက်ရန်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသည်သင်၏စာရင်းစစ်ကိုတစ်နှစ်လျှင်သုံးကြိမ်လိုက်နာရန်နှင့်အခြားရက်ပေါင်း ၃၅၀ အတွင်းဘာမျှဖြစ်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ ၎င်းသည်စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူများစွာအတွက်မှန်ကန်သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည် LFCS (ငါလုပ်ခဲ့သည့်နေရာကိုရှာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ထံအပ်နှံလိုက်သည်။ ) ဤသည်မှာသင်တန်းကာလအတွင်းအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏စက်ကိရိယာများနှင့်၎င်း၏အစီအစဉ်များကိုခေတ်မီစေရန်အရေးကြီးသည်။ အရေးပါအများဆုံးအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်။ သေချာတာပေါ့ဒီမှာများစွာသောငါ့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သုံးတဲ့ program ကနောက် version မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး သို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုခုကြောင့်၊ အမှန်တရားကတော့နောက်ဆုံးပရိုဂရမ်တွင်အလုပ်မလုပ်လျှင်သင်၏ပရိုဂရမ်သည်အချိန်ဗုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယခင်အပိုင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ မင်းဒါကိုလျှော့ချနိုင်လား။ မင်းအဲဒါကိုလွှဲပြောင်းနိုင်မလား။
အမှန်စင်စစ်ပြောရလျှင်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးတိုက်ခိုက်မှု၏ ၇၅% သည်အတွင်းမှဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသင်၏ကုမ္ပဏီတွင်မသင်္ကာစရာသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးပြုသူများရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်စဉ်တွေကaအတွက်ခက်ခဲစေမှာမဟုတ်ဘူး ဟက်ကာ သင့်ရဲ့ဝုဏ်အတွင်းသို့မဟုတ်ကွန်ယက်သို့ချိုးဖျက်။ 90% ကျော်သောတိုက်ခိုက်မှုဟာခေတ်မမီတော့တဲ့ software ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ အဘယ်သူမျှမ ၏အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် နေ့ကသုည.
ငါမိတ်ဆက်ပေးမယ် ယောဟန်သည်။ လုံခြုံရေးချစ်သူများအကြား၎င်းသည်သင်ကမ္ဘာပေါ်၌စတင်သောအခါအကောင်းဆုံးအစမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျင့်ဝတ် hacking. ယောဟနျသ ငါတို့သူငယ်ချင်းနဲ့သူအံ့သြသွားတယ် အကြပ်အတည်း။ အခြေခံအားဖြင့်သူသည်သူအားပေးအပ်ထားသည့်စာရင်းကိုရယူပြီးသူရှာနေသောစကားဝှက်ကိုဖြေရှင်းရန်သော့ကိုမတွေ့မချင်းပေါင်းစပ်မှုများကိုစတင်သည်။
အကြပ်အတည်း ပေါင်းစပ်တဲ့မီးစက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စာလုံး ၆ လုံးပါသည့်စကားဝှက်တစ်ခုကို crunch အားပြောနိုင်ပြီးစာလုံးအကြီးနှင့်စာလုံးအကြီးများပါဝင်ပြီး crunch သည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုစမ်းသပ်သည်။ ဥပမာ -
ပြီးတော့သူတို့ကစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုသေချာပေါက်ဘယ်လောက်ကြာကြာဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတာတွေးမိတယ်။ အဲဒါထက်နည်းနည်းလေးပိုကြာတယ် မိနစ်။ ပါးစပ်ဖွင့်ထားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါရစေ။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကွင်းဆက်တွင်အားနည်းချက်သည်လူနှင့်သူ၏တွေးခေါ်ပုံဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်ပေါင်းစပ်မှုများကိုစမ်းသပ်ရန်မခက်ခဲပါ၊ အလွန်အမင်းထပ်ခါတလဲလဲပြောရလျှင်၊ နှစ်များတစ်လျှောက်ပရိုဆက်ဆာများသည်အလွန်အစွမ်းထက်လာသဖြင့်တစ်ထောင်ထက်ပိုသောကြိုးစားမှုများပြုလုပ်ရန်မလိုတော့ပေ။
ယခုမူကားကောင်းသောဥပမာယခင်နမူနာသည်ဥပမာဖြစ်သည် လူ့အတွေးအခေါ် ယခုငါတို့သွား၏ စက်ယန္တရားစဉ်းစား:
crunch ကိုပြောရုံနှင့်စကားဝှက်ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ပါ 8 ဂဏန်းတွေ၊ အရင်လိုအပ်ချက်တွေအရ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာမိနစ်ကနေစခဲ့တာပါ နာရီ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို ၁၀ ခုထက်ပိုပြီးသုံးခိုင်းရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာခန့်မှန်းကြပြီးသူတို့ဖြစ်လာတယ် ရက်ပေါင်း။ 12 ကျော်အဘို့ငါတို့ပြီးသားဖြစ်ကြသည် လများထိုစာရင်းသည်ပုံမှန်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်း။ မရနိုင်သောအချိုးအစားများဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀ သို့ရောက်ပါက၊ ကွန်ပျူတာသည်နှစ်ပေါင်းရာချီ။ (လက်ရှိပရိုဆက်ဆာများဖြင့်) စာဝှက်။ မရနိုင်သောအရာများအကြောင်းပြောကြသည်။ ၎င်းတွင်သင်္ချာဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ရှိသည်။ သို့သော်နေရာများ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုဤနေရာတွင်ရှင်းပြမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ permutation, Las ပေါင်းစပ် နှင့် ပေါင်းစပ်။ ပိုမိုတိကျစွာပြောရလျှင်၊ အက္ခရာတစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ဖြည့်သည့်စာသည် ၅၀ နီးပါးရှိသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာတစ်ခုခုရှိမယ်
20^50 ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးစကားဝှက်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှပေါင်းစပ်။ သင်္ကေတ (၂၀) ​​၏အဓိကအရှည်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေမည်မျှရှိသည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏ဂဏန်းတွက်စက်ထဲသို့ထိုနံပါတ်ကိုထည့်ပါ။
မလွယ်ကူပါ။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကစာလုံးရေ ၂၀ အက္ခရာ ၂ လုံးပါသောစကားဝှက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားပြောရန်ပြောလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်စကားဝှက်များဖြစ်သည်။ စကားများ သော့။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး မှတ်မိရန်ခက်ခဲသော်လည်းစက်တစ်လုံးအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်လူတစ် ဦး မှတ်မိရန် (ရယ်စရာပင်) အလွန်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းသည်ငရဲဖြစ်သည် အကြပ်အတည်း။ ယခုတွင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောသူကကျွန်ုပ်ကိုပြောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသော့များကိုအတန်းလိုက်ပြောင်းခြင်းသည်မသင့်လျော်ပေလော။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကိုထောက်ခံတယ်၊ ဒါဆိုရင်ငါတို့ကငှက်နှစ်ကောင်ကိုကျောက်တုံးတုံးနဲ့သတ်နိုင်ပြီ။ ငါဖတ်နေဒီလဆိုပါစို့ Don Quixote de la Mancha၊ အတွဲ ၁ ။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်တွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုထည့်ပေးပါမည်။
သင်္ကေတ ၂၀ ပါ၊ ကျွန်တော့်ကိုမသိဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အလွန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာကျွန်ုပ်စာအုပ်ပြီးဆုံးသောအခါ (သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ဖတ်နေသည်ဟုယူဆလျှင်🙂) သူတို့သည်သူတို့၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရမည်ကိုသိလိမ့်မည်၊
ကျွန်ုပ်ရေးထားသည့်အရာသည်လုံလောက်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများစွာအကြောင်းပြောဆိုလိုပါကကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ထားရှိပါသည် for နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ဒီအဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ hack ခံရခြင်းကိုရှောင်ပါ
Linux ပေါ်မှာ hardening အတွက်သင်ခန်းစာတွေ upload လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ အချိန်နည်းနည်းလောက်ပေးလို့ရမလား၊ ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုမျှဝေပေးပါတယ်🙂
၎င်းကိုစပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုကူညီရန်နှင့်ကြီးကြီးမားမားကူညီရန်အားပေးပါက
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပေမယ့် brute force တိုက်ခိုက်မှုဟာခေတ်နောက်ကျသွားပြီ၊ ElQuijoteDeLaMancha1 လိုမျိုးစကားဝှက်မျိုးဆက်တွေဟာအလားအလာရှိတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုလို့မထင်ရပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာနည်းနည်းဖြင့်စကားဝှက်များကိုရှာတွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဤအမျိုးအစားသည်၎င်းကိုအပေါ်ယံအားဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စသာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူမ၏လူမှုကွန်ယက်များ၊ အသိအကျွမ်းများသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်များတွင်လူ့သဘောသဘာဝအရ၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပြလိမ့်မည်။
ကျနော့်အမြင်မှာအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကစကားဝှက်မန်နေဂျာကိုသုံးတာပါ။ ဂဏန်းပေါင်း ၁ ဝဝရှိတဲ့ဂဏန်း ၂၀ ထက်ဂဏန်း ၁၀၀ စကားဝှက်ကိုသုံးတာကပိုလုံခြုံတာကြောင့်၊ ပင်မစကားဝှက်ကိုလူသိများတာသာဖြစ်တယ်၊ အားသာချက်လည်းရှိတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများသည်၎င်းတို့မသိသောကြောင့်ထုတ်လုပ်သောစကားဝှက်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အက္ခရာ ၁၅၀၀ သာ (လုံးဝမလိုအပ်သော ၁၀၀% လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိရခြင်း) သည်လုံးဝအန္တရာယ်ကင်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်ဟုမဟန်ဆောင်ပါ။ absolutely (လုံးဝမလိုအပ်ဘဲထပ်မံရေးသားလိုခြင်းမဟုတ်ပါ) သို့သော်သင်ပြောသကဲ့သို့ ၁၀၀ က ၂၀ ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ကောင်းပြီ၊ ၂၀ က ၈ ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ငါတို့အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုအားအနည်းဆုံးဆက်သွယ်မှုကလူပဲ၊ ဒါကြောင့်အာရုံစိုက်မှုအမြဲတမ်းဖြစ်မယ့်နေရာဖြစ်တယ်။ ငါနည်းပညာအကြောင်းသိပ်မသိပေမယ့်လုံခြုံရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ "လူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာများ" ကိုငါသိတယ်။ ပိုမိုခက်ခဲသည်မှာပရိုဂရမ်များမှအားနည်းချက်များကိုတွေ့ရှိသောစစ်မှန်သောဟက်ကာများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် (သုည - နေ့ဟုသတ်မှတ်သည်)
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ပိုမိုကောင်းမွန်သော” ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းပြောဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထည့်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူအမျိုးအစားနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအချိန်တွင်“ ပိုမိုကောင်းမွန်သော” ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းပြောနိုင်သည်။ link ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးရှိပေမယ့် password manager တွေအများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူး၊ သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဆန္ဒကနောက်ဆုံးမှာ ... အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ ထင်ရှားအများအပြားသော့ဆိုလို။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး၊ ChrisADR Linux system administrator တစ်ယောက်အနေနှင့်ယနေ့ခေတ်တွင်စကားဝှက်များကိုခေတ်မီစေရန်နှင့်ယနေ့ခေတ်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ကိုမပေးအပ်ရန်သတိပေးသည်။ ၎င်းသည်တောင်မှစကားဝှက်သည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၉၀% ၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ဟုသာထင်သောသာမန်လူများအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ကွန်ပြူတာလုံခြုံရေးအကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်မြတ်နိုးရသောလည်ပတ်မှုစနစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလုံခြုံရေးကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးများထပ်မံကြည့်ရှုလိုပါသည်။ ငါသင်တန်းများနှင့်သင်တန်းများမှတဆင့်ရရှိသောအသိပညာထက်ကျော်လွန်လေ့လာသင်ယူဖို့နောက်ထပ်တစ်ခုခုအမြဲရှိကွောငျးယုံကြည်ကြသည်။
ငါမှတပါး Gnu Linux အတွက်ပရိုဂရမ်အသစ်တစ်ခုအကြောင်းကျွန်ုပ်ရှာဖွေရန်ဤဘလော့ဂ်ကိုအမြဲတိုင်ပင်သည်။
သငျသညျနံပါတ်များနှင့်အရေအတွက်နှင့်အတူအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်, ဘာလို့လဲဆိုတော့ "DonQuijoteDeLaMancha1" ("DonQuijote de La Mancha" မတည်ရှိ; p) "M¡¢0nt®a $ 3Ñ @ •" ထက်ပိုလုံခြုံတာကဘာလဲ?
combinatorial math အကြောင်းကိုဘာမှမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ထားတဲ့ရိုးရိုးအက္ခရာအစုံပါတဲ့ရှည်လျားတဲ့စကားဝှက်ကပိုကြီးတဲ့ character set နဲ့တိုတာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါမယုံကြည်နိုင်သေးဘူး။ ဖြစ်နိုင်သောပေါင်းစပ်မှုအရေအတွက်သည် UTF-8 အားလုံးကိုသုံးခြင်းထက်လက်တင်အက္ခရာများနှင့်ဂဏန်းများကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်အမှန်တကယ်သာလွန်ပါသလော။
ဟိုင်းဒီနီ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့သွားကြစို့။ သင်ဟာသော့ခတ်အဖြစ်နံပါတ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီသေတ္တာတစ်ခုထဲရှိဖူးလား။ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ကြရအောင် ... သူတို့ဟာ ၉ ​​ခုရောက်ပြီဆိုလျှင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုခုလိုနေတယ်
တစ်ခုချင်းစီတွင် diaz ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်သောပေါင်းစပ်မှုအရေအတွက်ကိုသိလိုပါကသင်ရိုးရိုးမြှောက်ခြင်းကိုလုပ်ရလိမ့်မည်။
ASCII ဇယားတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာလုံးရေ ၂၅၅ လုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှသာမန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နံပါတ်များ၊ စာလုံးအကြီးများ၊ အကြီးများနှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်များကိုသုံးလေ့ရှိသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂဏန်း ၆ လုံးပါ ၀ င်သောရွေးချယ်စရာ ၇၀ ခန့်ပါ ၀ င်သည်။ (စာလုံးအကြီး၊ အသေး၊ နံပါတ်များနှင့်အချို့သောသင်္ကေတများ) ။
သင်မှန်းဆနိုင်သလောက်အတိအကျဖြစ်ဖို့အတော်လေးကြီးမားတဲ့ကိန်းဂဏန်းပါ။ ထိုအရာများအားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ခြေပေါင်းစပ်မှု ၆ လုံးပါသော key space အတွက်ဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ချေများရောင်စဉ်ကိုများစွာလျှော့ချတော့မည်ဖြစ်သည်။ ၄၅ ကိုသာအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ (စာလုံးအသေး၊ နံပါတ်များနှင့်ရံဖန်ရံခါသင်္ကေတဖြစ်နိုင်သည်) သို့သော်ပိုမိုရှည်လျားသောစကားဝှက်တစ်ခုဖြင့်ဂဏန်း ၂၀ လုံး (ဥပမာဥပမာမှာရှိသည်) ဆိုပါစို့။ 117 လိုမျိုး။
ဖြစ်နိုင်ခြေများ၏အရေအတွက်သည်… 1 159 445 329 576 199 417 209 625 244 140 625 …ဒီနံပါတ်ကိုဘယ်လိုရေတွက်သလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့အဲဒါဟာနည်းနည်းပိုကြာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီထက်ပိုပြီးလျှော့ချတော့မယ်။0ကနေ9အထိသာကိန်းဂဏန်းများကိုသာသုံးမည်
ဤရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းအားဖြင့်သင်ပေါင်းစပ်ထားသောပေါင်းတစ်သိန်းတစ်သိန်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညီမျှခြင်းမှာပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ဂဏန်းတစ်ခုစီကဖြစ်နိုင်ခြေကိုအဆတိုးစေပြီးတစ်ခုတည်းသော box ထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်ပေါင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ယခုမူကား၊ ငါတို့လူသားတို့အတွက်၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်သောအရာကိုသာရှာပါ၏။
“ M¡ nt 0nt®a $ 3Ñ @ •” ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ရေးဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင်သင်နေ့စဉ်ချရေးရမည့်အချက်ကိုယူဆကြပါစို့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကကွန်ပျူတာကိုသိမ်းဆည်းတာကိုမကြိုက်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အများကြီးပိုမြန် (ကျနော့်အမြင်အရ) အဲဒါဟာမင်းသဘာဝကျကျရေးနိုင်တဲ့စာလုံးတွေကိုရေးတာပါ၊ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကသော့တွေကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲပစ်တာဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အနည်းဆုံးတော့… .. သင်၏စနစ်၊ လျှောက်လွှာ၊ ပရိုဂရမ်၊ UTF-8 ၏အက္ခရာများအားလုံးကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့်လူ၏စိတ်နေသဘောထားပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးပြုမှုကိုတောင်မှပိတ်ထားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် application သည်သင်၏စကားဝှက်အချို့ကို“ ပြောင်းလဲ” စေ။ အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အမြဲတမ်းသိထားသည့်အက္ခရာများနှင့်လုံခြုံစွာကစားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
Odoo 8 တွင် module မ်ားမည်သို့ install လုပ်ရမည်နည်း